ရ​ဘေးအန္တရာယ်​ရင်​ဆိုင်​​နေရတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်​ငံ၊ Karnataka ပြည်​နယ်မှာ ဒုက္ခ​တွေကြားထဲကပဲ ထူးခြားဖြစ်​စဉ်​တစ်​ခု ရှိခဲ့ပါတယ်​။ ပြည်​နယ်​မှာ ​ရေလွှမ်းမိုး​မှု​ကြောင့်​ ​နေအိမ်​​တွေ​ဟာ ​ရေထဲစုန်းစုန်းမြုပ်​ကုန်​ပြီး ​အိမ်​​ခေါင်​မိုး​တွေကိုသာ မြင်​ရ​တော့တဲ့ အ​ခြေအ​နေပါ။
ဒီ ဗွီဒီယိုကို Hindustan Times သတင်းမီဒီယာဌာနက​နေ တင်​ဆက်​​ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်​ပြီး တုန်​လှုပ်​ဖွယ်​ရာ မိ​ချောင်းကြီးရဲ့ဗွီဒီယို အ​တော်​​လေး​ရေပန်းစား​သွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ​မြွေပူရာကင်း​မှောင့်​ဆိုသလိုပဲ ​ရေ​ဘေးဒဏ်​ရင်​ဆိုင်​​နေရတဲ့ ပြည်​နယ်​တွင်း ​ဒေသခံပြည်​သူ​တွေဟာ မိ​ချောင်းကြီးရဲ့ အန္တရာယ်​ပြုခြင်းခံခဲ့ရ​သေးသလား ဆိုတာ​တော့ အတိအကျ မသိရှိရ​သေးပါဘူ
August 13,2019ရေဘေးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ Karnataka မှာ ရေမြုပ်နေတဲ့ နေအိမ်တစ်လုံးပေါ်မှာ တွေ့ ရတဲ့ မိချောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။sawThe house was submerged due to floods in Karnataka's Belgaum. The video dates to August 11. Karnataka is one of the states reeling under severe rain and flooding.
Geplaatst door Social Action for Children and Women – SAW op Maandag 12 augustus 2019